Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo Afhayeen Cusub loo Magacaabay. - Awdinle Online
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo Afhayeen Cusub loo Magacaabay.
May 06, 2020 (Awdinle Online) – Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Cabdi Maxamed Xijaar ayaa Afhayeenka cusub ee ciidanka booliska u magacaabay Dhamme Sadiiq Aadan Cali oo ku magac dheer Duudishe.
Qoraal ka soo baxay Taliska booliska ayaa lagu sheegay in Sarkaalkan uu ciidanka kusoo biiray sanadkii 2007-dii.
Sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalka in Dhamme Sadiiq Aadan uu soo dhameystay tababar Layli sarkaal ah, kaas oo dhan mudo seddax sano ah, islamarkaana uu ku soo qaatay dalka dibadiisa.
“Afhayenka cusub ayaa ku hadla luuqadaha English, Taliyaani iyo Carabi marka laga reebo afka Hooyo,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay taliska booliska Soomaaliya.
Qoraal Taliska booliska ayaa intaas ku daray, “Sarkaalkan ayaa ka soo shaqeeyay guud ahaan fadhiyada ciidanka, soona qabtay xiriiro dowlado ciidanka taageera, isaga oo soo qabtay shaqooyin kala duwan, hadana xubin firfircoon u’ah ciidanka Boliiska Soomaaliyeed.”
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Kenya uga tacsiyadeeyay Muwaadiniin uga dhimatay Diyaaradii ku burburtay Bardaale.
Next articleSuudaan iyo Itoobiya oo ka hadlay xiisadda ka taagan xuduuda labada dal